जापानमा गयो ठुलो भूकम्प, यस्तो छ अवस्था – Etajakhabar
जापानमा गयो ठुलो भूकम्प, यस्तो छ अवस्था
टोकियो, १३ मङ्सिर : जापानको उत्तरपूर्वी इलाकामा रहेको तटीय क्षेत्रमा शुक्रबार ५.५ म्याग्नीच्युडको भूकम्प गएको छ । यद्यपी यस भूकम्पपछि सुनामी चेतावनीको कुनै सूचना जारी गरिएको छैन । तटीय इलाका सनरिकुमा स्थानीय समयानुसार शुक्रबार अपराह्न १ बजेर १ मिनेटमा सो भूकम्प गएको हो ।
उक्त भूकम्पको केन्द्रबिन्दु जमिनको सतहबाट १० किलोमिटर गहिराइमा रहेको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । यस भूकम्पका कारण कुनै धनजनको क्षतिको विवरण भने प्राप्त भएको छैन ।
जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री यासुहिरो नाकासोनेको १०१ वर्षको उमेरमा शुक्रबार निधन भएको छ । जापानका निकै लोकप्रिय नेताको छवि बनाउनु भएका नाकासोनेले आफ्नो कार्यकालमा संयुक्तराज्य अमेरिकासँग बलियो सैनिक गठबन्धन निर्माण गर्नु भएको थियो ।
सन् १९८२ देखि १९८७ सम्म पाँच वर्ष जापानको प्रधानमन्त्री रहनु भएका नाकासोनेले रुस र अमेरिकाबीचको शीतयुद्धकालीन समयमा जापानलाई पश्चिमा राष्ट्रसँगको गठबन्धनमा उभ्याउनु भएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानलाई आर्थिक तथा सामरिक रुपमा बलियो राष्ट्र बनाउन नाकासोनेले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनसँग सुदृढ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्नुभएका नाकासोनेले जापानका लागि अमेरिका सदैब अति महत्वपूर्ण साझेदार मुलुक रहेको बताउने गर्नुहुन्थ्यो ।
जापानको माथिल्लो सदनका सदस्य समेत रहनुभएका नाकासोनेका छोरा हिरोफुमी नाकासोनेको कार्यालयले आफ्ना बुबाको निधन भएको जानकारी दिनुभयो । तर उहाँले मृत्युको कारणका बारेमा विस्तृत केही उल्लेख गर्नुभएको छैन ।
पूर्व प्रधानमन्त्री नाकासोनेले दोस्रो विश्वयुद्धकालीन सम्झौताहरुमा फेरबदल गरी सैनिक प्रविधि अमेरिकालाई निर्यात गर्नुका साथै जापानको वार्षिक रक्षा बजेटको सीमालाई हटाउनु भएको थियो ।
जापानमा राष्ट्रवादी छवि बनाउनुभएका नेता नाकासोनेले जापानमा रेल र टेलिफोन अपरेटर प्रणालीलाई निजीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँका आर्थिक नीतिहरु बजार उदारीकरणतर्फ केन्द्रित थिए ।
नाकासोनेले दोस्रो विश्वयुद्धकालीन तिक्ततालाई थाँती राख्दै चीन र दक्षिण कोरियासँग मैत्री सम्बन्ध विकास गर्नु भएको थियो । उहाँ दक्षिण कोरिया भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो ।
Posted on: Friday, November 29, 2019 Time: 14:51:48
आज विश्वभरी कोरोनाले कुन देशमा कतिको निधन भयो ? यस्तो छ नयाँ डाटा !
-19812 second ago
-18085 second ago
-17447 second ago
-16334 second ago
-15505 second ago